Wise Care 365 pro v2.83 Build 225 Full With Keygen ~ လမင်းတရာ
Wise Care 365 pro v2.83 Build 225 Full With Keygen
IN Optimizer - ON 11:27 PM No comments
Wise Care 365 2.83 Build 225 | 7.7 MB
Wise Care 365 pro v2.83 Build 225 Final ဗါးရှင်းလေးကတော့ System Tool လေးတခု ဖြစ်ပြီးတော့ အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ Features တွေ တော်တော်လေး များပါတယ်..။ ဒီကောင်လေးရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေက Advanced System Care တို့လို၊ CCleaner တို့လို ပါပဲ..။ ဒီကောင်လေးမှာက အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Features
တွေပိုစုံတာတွေ့ရပါတယ်..။ကွန်ပျူတာနဲ့ Browser တွေလေးနေ ၊ နှေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုSystem
Tool လေးတွေကိုအသုံးပြုပေးလိုက်ရင်မိမိတို့ရဲ့ဝင်းဒိုးဟာ ပြန်လည် မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်..။အသုံး
မပြုခင်အရင်ဆုံး Restore Points လေးတွေ ဖန်တီးထားသင့်ပါတယ်..။ Recover ဖြစ်အောင်လို့ပါ..။
လိုအပ်တဲ့သူများကတော့အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 7.7MBရှိပါတယ်..။
Wise Care 365 will keep your PC in tiptop shape and at peak performance! What you need to do is just one click when you use Wise Care 365. And your old PC will turn intoabrand new and blazing fast one after Wise Care 365′s automatic cleanup and tuneup.
Provided novice guider
Able to show you the local temperature
List the utilities you usually use in the right column according to your use frequency
Provided various skins and avatars
Released (Sep. 29, 2013)
Fixed the failures in changing themes.
Improved the algorithm of scanning invalid software paths to make it more comprehensive and safe.